ကန်ဇွန်းဥပြင်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားက သာကူပြင်ကလာတာပါပဲ...။ ပထမဆုံးစားဖူးတာက ဗဟိုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ “ပန်းခရေ”ဆိုတဲ့ အိမ်ချက်မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ကပါ...။ ပန်းခရေမုန့်ဟင်းခါး စားကောင်းတယ် ညွှန်းကြလွန်းလို့ သွားစားရင်း အော်ဒါမှာထားတဲ့ ကန်ဇွန်းဥပြင်လေးကို မြည်းကြည့်ဖြစ်သွားတာပါ...။ အရသာတော်တော်ကောင်းတယ် သာကူပြင်ထက်ကို ကောင်းတယ်...။ တခါသုံး အဖုံးပါတဲ့ ကော်ဗူးပျော့လေးနဲ့ နှစ်လက်မပတ်လည် ထုတစ်လက်မခွဲလောက် တစ်တုံးကို တစ်ခါစာစားဖို့ ဇွန်းပါပါပြီး 1500/- ပါ...။ အဲဒါနဲ့ ဆိုင်ရှင်ကိုနည်းနည်းစပ်စုလိုက်တယ် ဒီထဲမှာဘာတွေပါလည်းပေါ့...။ အချိုက သကြားမသုံးဘူး ကန်ဇွန်းဥရဲ့ သဘာဝအချိုနဲ့ပဲဖုတ်ထားတာတဲ့ ကန်ဇွန်းဥကိုအသားထဲ ဘာတွေထည့်ထားလဲတော့ မမေးတော့ပါဘူး စားကြည့်ရင်းနဲ့ မှန်းကြည့်လိုက်တာ...။ အ်ိမ်မှာ ပြန်လုပ်ကြည့်တော့ဖြစ်သွားတယ်..။ အသစ်အဆန်းမုန့်လုပ်ရင် ပထမဆုံးအကြိမ်က ပျက်တာများတယ်လေ ဒီတစ်ခါ ကန်ဇွန်းဥပြင်ကို စမ်းလုပ်တာမပျက်ဘူး...။ အပေါ်ယံက အုန်းနို့ကျိုနည်းလေးပဲ You Tube မှာ သာကူပြင်လုပ်တဲ့နည်းကို သွားကြည့်လိုက်တယ်...။ အုန်းနို့ပျစ်လာအောင် ဂျုံမုန့်လေးအရေဖျော်ထည့်ကျိုရတာ...။
ကျွန်မ ဒီကန်ဇွန်းဥပြင်ကို သုံးကြိမ်လုပ်ကြည့်ပြီးပြီ မြန်မာကန်ဇွန်းနဲ့တစ်ခါ ဂျပန်ခရမ်းရောင်ကန်ဇွန်းဥနဲ့ တစ်ခါ နောက်ဆုံးရွှေကန်ဇွန်းနဲ့တစ်ခါလုပ်ကြည့်ခဲ့တယ်...။ ဂျပန်ကန်ဇွန်းက အသားစေးပြီး အရောက်လှတယ် အချိုပေါ့တယ်...။ မြန်မာကန်ဇွန်းတွေကတော့ စေးပျစ်မှုနည်းတယ် အချိုလေးတယ် မုန့်ဖုတ်တဲ့အခါ ပြောင်းကော်မှုန့်လေး နည်းနည်းထည့်နယ်တယ်...။ လုပ်နည်းကို အသေးစိပ်မသိပေမယ့် ကိုယ်ဘာသာ ကိုယ်နည်းနဲ့ကိုယ် ပြောင်းကော်မှုန့်ထည့်လိုက်တာ... မုန့်သားလေးကျစ်ပြီး အခဲလေးဖြစ်အောင်လို့...။ ကျွန်မလုပ်တဲ့ ကန်ဇွန်းဥပြင် Recipe လေးကို အသေးစိပ်ပြောပြပါမယ်...။
ကန်ဇွန်းဥ တစ်ပိဿာ (မိမိနှစ်သက်ရာ ကန်ဇွန်းဥ)
ဂျုံမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း ငါးဇွန်း
Since I was (not use) stop posted on my face book, but I have been posting my baking and cooking on my instagram. Now I have to show you guys my new recipe of sweet potatoes cake with coconut cream. Let's see.
Sweet Potato 1 1/2 Kg
Coconut Milk 1 Litter
First, Clean up all the sweet potatoes, drain and steam for about 20 mins, make sure the sweet potatoes can mash. Preheat oven and grease the 12'' x 12 '' square pan. Then let's cool the steam sweet potatoes and peel off. Put the sweet potatoes in the large bowl and start mash. Add the corn starch and knead with hands to the smooth dough. Press the dough into the pan, level with the spatula and setaside. Add 1/2 cup of water, salt into the flour and stir thoroughly. Add the flour into the coconut milk and stir to combine. Put the coconut mixture intoasaucepan, simmer on medium heat , stirring with the whisk it all the time, gently until thick. Pour the thick coconut mixture on the sweet potatoes and bake at 200ံC for 25 mins. Remove from oven, cool down totally and chill for at least5hours before consume.
ပထမ 10မိနစ်လောက်ပဲအပေါ်မီးအောက်မီးပေးပါ ကျန်တဲ့အချိန်ကို အောက်မီးပိတ်ပြီး အပေါ်မီးနဲ့ပဲဖုတ်ပေးပါ...
ဒါက ကျွန်မတို့ မနှစ်က သိက္ခာထပ်ပေးထားတဲ့ ဦးဇင်းဦးသုန္ဒရရှိတဲ့ သုစိတ္တာရုံ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်က စာဖြေကိုယ်တော်တွေ အတွက် အာရုံဆွမ်းသွားကပ်တုန်းက အချိုပွဲလေးပါ ရွှေကန်းဇွန်းဥပြင်ပါ...။ ဘုန်းဘုန်းတွေကိုကပ်တဲ့ပွဲ ဓါတ်ပုံမရိုက်ထားမိလို့ ရွှေကန်ဇွန်းဥနဲ့ နောက်တစ်ခါလုပ်ဖြစ်ရင် ထပ်တင်ပါ့မယ်..။ ဦးဇင်းက ဘုန်းပေးပြီးတော့ ချီးကျူးသေးတယ် ဒကာမရဲ့ ကန်ဇွန်းဥပူတင်းက သိပ်ကောင်းတာပဲတဲ့...။ ကန်ဇွန်းဥရဲ့ သဘာဝအချိုနဲ့ အပေါ်က အုန်းနို့နံ့မွှေးမွှေးဆိမ့်ဆိမ့်နဲ့မို့ သာကူပြင်ထက် ပိုစားကောင်းတယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ်...။ အချိန်အားလေးရှိရင် လုပ်စားကြည့်ပါ အရမ်းလွယ်လွန်းလို့ပါ...။
Enjoy Baking !!!!!!!!!
Posted by Cameron at 04:21
Labels: simply coral's kitchen (baking), simply coral's kitchen(အချိုပွဲများ)
Keto Mug Bread.....